Wiil harqaanle ah oo soo jiitay macaamiil u badan hablo | Radio Himilo
Home / Caruurta / Wiil harqaanle ah oo soo jiitay macaamiil u badan hablo
Posted by: Ahmed Haaddi October 27, 2021
Himilo – Muddo sanado ah, wiilkan yar ee Falastiiniga ah oo lagu magacaabo Axmed Cabaas wuxuu daawan jiray sida uu aabbihiis u tolayo dharka, maalin ayuu soo qabsaday maqas kaddibna wuxuu ku jaray gabbal maro ah, taas oo aheyd markii ugu horreysay ee uu sameeyo isku day uu ku baranayo shaqada harqaanka.
Tan iyo maalintaas, Ahmad, oo 13 jir ah, waxaa loo tixgeliyey dawaarlaha ugu yar ee Gaza wuxuuna yeeshay macaamiil u gaar ah oo ka madaxbannaan aabbihiis.
“Waxaan ku cayaarayay oo aan ku tolaayay waxyaalo fudud harqaanka, markii aabbahayna uu arkay anigoo ku raaxaysanaya, wuxuu i baray xirfaddan, maalinba maalinta ka dambaysa waxaan awooday inaan tolo oo aan noqday xirfadle.” Ayuu yiri Axmed Cabaas.
Amina Nasaar, oo ka mid ah macaamiisha Axmed, ayaa sheegtay inuu awal uu u toli jiray aabbihiis, Muxammad Cabaas, laakiin hadda ay ku tiirsan tahay wiilkan yar in uu dharka u tolo.
Waxay intaas ku dartay, “Waxaan mar walba u imaan jiray Axmed aabbihiis, balse waxaan ka helay Axmed shaqadiisa, marka waxaan ku qancay qaabka uu u tolaayo dharka, wuxuu iga qaadaa cabbir, kama xishoodo, waayo wuu da ‘yar yahay waana da’da carruurtayda. “
“Dumarku waxay yimaaddaan harqaanka, sababta oo ah waxay dareemayaan qanacsanaan iyo raaxo, waayo waan yarahay, waana u tolaa, ma xishoodaan, waxayna ku faraxsan yihiin inay ila shaqeeyaan, waxaana jeclahay inaan noqdo naqshadeeye dharka hab casri ahna u tolo markaan weynaado.” ayuu yiri Axmed Cabaas.
Axmed ayaa sheegay inuu xirfadan bartay isagoo 10 jir ah, si joogto ah ayuu wax u bartaa mana tago shaqada ilaa uu kasoo laabto dugsiga,
Previous: Barnaamij ku saabsan cudurka Dabeysha
Next: Maqal– Raxiiqul Makhtuum – Casharka 93aad